Xiinxalaa Siyaasaa Jawar Mohammad mana hidhaa keessatti hedduu dhukkubsachaa jiraachuu maatiin isaa OMNtti himan. – Rabira News
Maatiin Jawaar mahaammad, Jawar dubbusuu yeroo dhaqnetti, nu waliin dubbachuu hin dandeenye jedhan.
Fuulli isaa dhidhiita’ee jira; dhaabbatee nu haasofsiisuuf yaalus sababa ijaajjuu (dhaabbachuu) dadhabeef ofirra gad taa’ee jedhan maatiin Jawar.
Nutis haala fayyaa jawartti rifannee kan jedhan maatiin Jawar dhimma kana qaamilee mana hidhaa eegan irraa adda baafachuufillee hin dandeenye jechuun himan.
Jawaar heddu dadhabee jiraa, maaliif akka yeroo gabaabaa keessatti akka akkanatti dhukkubsate irratti shakkii qabnas jedhan maatiin Jawar.
Yaa Ummaata Oromoo, Jawar yeroo akkanatti dararamu maaliif calliftan jechunis gaafatan.